“Ma dooneyno saxiixa Haaland” – kooxdii ugu horreysay ee si cad u diidday xiddiga Dortmund oo isaga baxday raacdadiisa – Gool FM
“Ma dooneyno saxiixa Haaland” – kooxdii ugu horreysay ee si cad u diidday xiddiga Dortmund oo isaga baxday raacdadiisa
(Germany) 31 Maarso 2021. Inta ugu badan kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub ayaa xiiseynaya laacibka Borussia Dortmund weerarka kaga ciyaara ee Erling Haaland, kaasoo saxiixiisa suuqa xagaagan aad loogu tartamayo.
Hase ahaatee, kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa gaashaanka u daruurtay sheekooyinka la xiriirinaya laacibkan, iyagoo sheegay inaysan dooneyn saxiixa Haaland maadaama ay heystaan Robert Lewandowski.
Agaasimaha naadiga Bavarians ee Karl-Heinz Rummenigge ayaa sheegay inay kooxdiisa heysato weeraryahanka dunida ugu wanaagsan ee Lewandowski, sidaas darteedna aysan qorshaha ugu jirin inay u dhaqaaqaan 20-jirka Dortmund u ciyaara.
“Ma aqaan halka ay ka timid xantani” ayuu Rummenigge u sheegay jariiradda The Bild ee Jarmalka kasoo baxda.
Waxaana uu hadalkiisa sii raaciyay: “Waxaan heysannaa xiddiga ugu wanaagsan booskiisa, Robert Lewandowski oo heysta heshiis gaaraya illaa 2023”.
Si kastaba ha ahaatee, Bayern ayaa fursad badan siisay kooxaha doonaya saxiixa Haaland maadaama aysan iyagu dooneyn u dhaqaaqista soo xero gelintiisa.
Weeraryahanka reer Norway oo 12 sano ka yar Lewandowski ayaa 25 gool iyo hal caawin meel ku qortay kaddib 25 kulan oo uu Bundesliga ciyaaray fasalkan, halka laacibka Polish-ka ah uu isaguna shaqaba dul dhigay 35 gool markii uu ciyaaray 25 kulan oo horyaalka Jarmalka ah, waxaana intaas u raacsan lix caawin oo uu saaxiibbadii u salaxay.
Lacagaha wakiillada ciyaartoyda kubadda cagta ay ka kasbadeen horyaalka Taliyaaniga sanadka 2020 oo lasoo bandhigay... (Waa immisa?)